Headline Nepal | आईफोन र आईप्याडका कुन मोडलमा चल्छ नयाँ अपरेटिङ सिस्टम ?
आईफोन र आईप्याडका कुन मोडलमा चल्छ नयाँ अपरेटिङ सिस्टम ?
एप्पलको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमको रुपमा रहेको ‘वर्ल्ड वाइड डेभलपर कन्फ्रेन्स २०२१’ (डब्लूडब्लूडीसी २०२१) सोमाबारदेखि सुरु भएको छ । शुक्रबारसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा एप्पलले आईओएस, प्याडओएस, म्याकओएस, वाचओएसमा उल्लेख्य फिचर थप गर्दै परिस्कृत भसर्न प्रस्तुत गरेको छ ।
कार्यक्रममार्फत नयाँ फिचरहरुको प्रस्तुत भएपनि आईओएस १५ र आइप्याड १५ भने आउँदो जुलाईबाट बेटा भसर्नको रुपमा प्रयोगकर्तामाझ उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यस्तोमा अब एप्पलले उपलब्ध गराउने नयाँ भसर्नको ओएस तपाईंको डिभाइसले सपोर्ट गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय सबैभन्दा चासोको विषय हो ।
यहाँ हामी आईफोनका कुन–कुन डिभाइसमा नयाँ ओएस सपोर्ट गर्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै छौं । हालसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार ओएस १५ हाल आईओएस १४ र आईप्याडओएस १४ चलिरहेका सबै डिभाइसमा चल्नेछ । तर ए९ प्रोसेसर भएका डिभाइसमा भने सपोर्ट गर्नेछैन ।
यसको अर्थ यहाँ उल्लेखित डिभाइसमा मात्रै आईओएस १५ सपोर्ट गर्नेछ :
आईप्याडको हकमा निम्नलिखित माेडलमा आईप्याडओएस १५ सपाेर्ट गर्नेछ :
यी एप्पल वाचमा वाचओएस ८ सपोर्ट गर्नेछ :